COVID-19 - Fotoana tokony hanomezan-danja ny vita Malagasy izao
Misedra olana ny sehatry ny fandraharahana ara-toekarena noho ny fisian’ny Coronavirus covid-19. Anisany vahaolana amin’izao toe-javatra izao ny fanjifana ny vita Malagasy.
Misedra olana ny sehatry ny fizahantany
Mpandraharaha maro no misedra olana noho ny fisian’ny aretina Covid-19 amin’izao. Anisany nampiaka-peo ireo mpandraharaha mivondrona ao amin’ny GEFP (Groupement des Entreprises Franches et Partenaires). Ahian’izy ireo hiteraka voka-dratsy eo amin’ny toekarena sy ny sosialy ny fepetra noraisin’ny Fanjakana ho fiarovana ny fiparitahan’ny aretina coronavirus.
Ankoatra izay dia nilaza ihany koa ny avy ao amin’ny TOP Mada (Tour–operators de Madagascar) fa
« efa tsy misy sambo mpitondra mpizaha tany intsony eto Madagasikara amin’izao satria efa tsy nandray izany intsony isika nanomboka ny volana Marsa 2020. Saika efa foana avokoa ny fandraisana mpizaha tany ho an’ny Tour operators« .
Fihaonana nataon’ireo avy ao amin’ny Ministera sy ireo mpisehetra eo amin’ny fizahan-tany. cc : Ministère du transport, du tourisme et de la météorologie.
Ahiana hisy fiantraikany ratsy ho an’ny fizahantany eto amintsika araka izany ny fisian’ny coronavirus covid-19.
Efa nisy ny fivoriana niaran’ny Minisiteran’ny Fitanterana, ny Fizahantany ary ny Famantarana ny toetry ny andro sy ireo mpisehatra amin’ny fizahantany tamin’ity herinandro ity teny Anosy mba hitadiavana vahaolana naharitra.
Vahaolana ny fanjifana ny vita Malagasy
Fotoana araka izany izao ny tokony hanomezan-danja ny vokatra vita Malagasy. Misy amin’ireo zavatra hafarantsika avy any ivelany no efa vokarin’ireo orinasa eto Madagasikara. Misy ihany koa anefa tsy misy eto ka voatery hafarana avy any ivelany. Noho izany dia fotoana izao hampiroboroboana ny sehatry ny famokarana ireo zavatra ilaina eto an-toerana sy hanjifana ny vokatra vita malagasy.
Ny fampiroboroboana ny famokarana eto Madagasikara raha teo no isany vahaolana amin’ny krizy manerantany toa izao iainantsika izao.